I-MongoDB 4.4, uyifaka njani kwiinguqulelo zamva nje zeLTS zoBuntu | Ubunlog
Kwinqaku elilandelayo siza kujonga indlela yokufaka iMongoDB kwi-Ubuntu. Yinkqubo ye database ejolise kuxwebhu, umthombo osekwe kwitekhnoloji I-NoSQL. Oku kuyahambelana nophuhliso lwesicelo sewebhu sangoku. Ibandakanya izinto ezinje ngokuguquguquka, iilwimi ezibuzayo, izikhombisi zesekondari, nokunye okuninzi. Ukongeza, ibonelela ngokusasazeka okukhulu kunye nokusebenza ukwenza usetyenziso lwangoku olunolwazi olunamandla.
IMondoDB endaweni yokugcina idatha kwiitafile, njengoko kusenziwa kulwazi lweedatha, igcina kubume bedatha ye-BSON (inkcazo efana neJSON) ngeschema esinamandla. Oku kwenza ukudityaniswa kwedatha kwizicelo ezithile kube lula kwaye kukhawuleze.
I-MongoDB yinkqubo yedatha ilungele ukusetyenziswa kwimveliso kunye nokusebenza okuninzi. Olu hlobo lwedatha lusetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso. Ikhowudi yayo yemithombo iyafumaneka kwiinkqubo zokusebenza ezinje; Gnu / Linux, Windows, OSX kunye neSolaris.
Kule migca ilandelayo siza kubona ukuba sinokwenza njani faka iMongoDB 4.4 kwiinguqulelo ezintathu zokugqibela ze-Ubuntu LTS, usebenzisa umphathi wepakeji efanelekileyo.
1 Faka iMongoDB 4.4
1.1 Inkxaso yeqonga
1.2 Yongeza indawo ekugcinwa kuyo iMongoDB kwi-Ubuntu
1.3 Faka indawo yedatha ye-MongoDB 4.4 kwi-Ubuntu
1.4 Ukuqala kweMongoDB
1.5 Qala iqokobhe le-mongo
2 Khupha ngaphandle
Faka iMongoDB 4.4
Ushicilelo loLuntu lweMongoDB 4.4 luqukethe ezi nguqulelo ze-Ubuntu LTS zilandelayo (Inkxaso yexesha elideI-64-bit: 20.04 LTS ('Focal'), 18.04 LTS ('Bionic'), 16.04 LTS ('Xenial')
Indawo ehlala i-Ubuntu yokugcina enika okanye inokubonelela ngohlobo oludlulileyo lweMongoDB. Ngesi sizathu Siza kufaka ingxelo yokugqibela yale nkqubo yedatha kwindawo yayo esemthethweni.
Yongeza indawo ekugcinwa kuyo iMongoDB kwi-Ubuntu
Ukufaka uhlobo lwamva nje lweMongoDB yoHlelo loLuntu kwi-Ubuntu, Kufuneka sifake ukuxhomekeka okuyimfuneko. Ukwenza njalo, kuya kufuneka sivule kuphela i-terminal (Ctrl + Alt + T) kwaye sisebenzise le miyalelo ilandelayo:
Siyaqhubeka ukungenisa isitshixo se-GPG esidlangalaleni kwi-MongoDB. Oku kusetyenziswa yinkqubo yolawulo lwephakheji kwaye siza kuyongeza usebenzisa wget ukusuka kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Emveni kwalonto Siza kwenza ifayile ye-mongodb-org-4.4.list eya kuthi iqulethe iinkcukacha zokugcina iMongoDB yokugcina ingxelo yoBuntu esiyisebenzisayo. Le fayile iya kubekwa kulawulo /etc/apt/source.list.d/. Ukuyila, kuya kufuneka siphumeze lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T), ngokuxhomekeke kuhlobo lwenkqubo yethu:
Ubuntu 20.04 (ejolise)
Ubuntu 18.04 (iBionic)
Ngoku siza kuya Hlaziya uluhlu lwesoftware ekhoyo ukusuka koovimba:
Faka indawo yedatha ye-MongoDB 4.4 kwi-Ubuntu
Ngoku ukuba indawo yokugcina iMongoDB yenziwe, sinako faka ingxelo yokugqibela ezinzileyo ukusebenzisa lo myalelo ulandelayo kwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T):
Ngexesha lofakelo ifayile yoqwalaselo iyakwenziwa /etc/mongod.conf, isikhombisi sedatha / var / lib / mongodngomkhombandlela welog / var / log / mongodb.
Ngokuzenzekelayo, iMongoDB isebenza phantsi kweakhawunti yomsebenzisi we-mongodb. Ukuba sitshintsha umsebenzisi, kufuneka sitshintshe nemvume kwidatha kunye neerekhodi zemikhombandlela, ukunika ukufikelela kwezi zikhombisi.
Ngoku sinako qala kwaye uqinisekise inkqubo ye-mongod ukusebenzisa le miyalelo ilandelayo:
Qala iqokobhe le-mongo
Ukuba yonke into ichanekile, sinako qala iqokobhe le-mongo ngaphandle kokhetho lokunxibelelana ne-mongodb eqhuba kumamkeli wasekhaya usebenzisa izibuko elingagqibekanga 27017:
ukuba susa ngokupheleleyo iMongoDB, kubandakanya usetyenziso lweMongoDB, iifayile zoqwalaselo, kunye nayo nayiphi na imikhombandlela enedatha kunye nelogKwisiphelo sendlela (Ctrl + Alt + T) kuya kufuneka senze le miyalelo ilandelayo:
Kwaye ngale nto sele sine-MongoDB kwi-Ubuntu. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokucwangciswa kunye nokusetyenziswa kweMongoDB 4.4, abasebenzisi banokudibana maxwebhu enikezelwa kwiwebhusayithi yeprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » I-MongoDB 4.4, uyifaka njani kwiinguqulelo zamva nje ze-LTS Ubuntu
I-Ascii Patrol, umdlalo ophefumlelwe yi-Patrol yeNyanga efumaneka njenge-snap